दाँतलाई बलियो र चम्किलो बनाउन के गर्ने ? « Drishti News
दाँतलाई बलियो र चम्किलो बनाउन के गर्ने ?
दाँतले शारीरिक स्वास्थ्यमा जति महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ, उत्तिनै आवरणमा पनि । जस्तो कि मान्छेको सौन्दर्यमा, व्यक्तित्वमा । त्यसैले त कवि–कलाकारहरुले दाँतलाई सौन्दर्यकै एउटा विम्ब बनाएर पेश गर्छन् । ‘मिलेका ति दाँतका पंक्ति ।’ ‘अनारका दाना जस्तै मिलेका दाँत ।’
दाँतलाई कसरी बलियो, सफा र आकर्षक राख्ने ?
दाँतलाई सफा राख्न धेरै गाह्रो छैन । खाना खाएपछि दाँत राम्ररी सफा गरे पुग्छ । दिनमा दुई पटक राम्ररी ब्रस गर्ने वा अन्य खानेकुरा खाइसकेपछि मुख कुल्ला गर्ने विधीले दाँत सफा हुन्छ । वा दाँतमा फोहोर जम्न पाउँदैन ।
तर, धेरैले के गल्ती गर्छन् भने विहान उठेर ब्रस गर्छन् । विहान उठेर दाँत ब्रस गर्नु त्यती महत्वपूर्ण छैन जति साँझ र बिहानको खानापछि गरिन्छ । खासमा खाना खाइसकेपछि ब्रस गर्नुपर्छ । कम्तीमा पनि दुई पटक ।
अर्को कुरा हामीले ब्रस गर्न सानैबाट सिकेका हुन्छौं तर, आश्चर्यजनक कुरा धेरैजसो मानिसहरुले अझै पनि सहि ढंगले ब्रस गर्न जान्दैनन् । दन्त चिकित्सकहरुका अनुसार स्वस्थ र मजबुत दाँतको लागि दैनिक ब्रस गरिसकेपछि जिब्रो पनि राम्रोसँग सफा गर्नुपर्छ ।
चिकित्सकका अनुसार हामीले दिनमा कम्तीमा पनि दुई पटक ब्रस गर्नुपर्छ र ब्रस गरेपछि नुनपानीले कुल्ला वा माउथ वास गर्नुपर्छ । यसले हाम्रो दाँत र गीजाहरुलाई ब्याक्टेरियाबाट बचाउँछ ।
ब्रस गर्ने सहि तरिका थाहा पाइराख्नु दाँतको सुरक्षाको पहिलो कदम हो ।
ब्रस गर्नको लागि कुनै पनि मानक समय हुँदैन । तर, दन्तचिकित्सकहरुले कम्तिमा दुई मिनेटसम्म ब्रस गर्नुपर्ने सल्लाह दिन्छन् । यसले मुखभित्रको सतहबाट विभिन्नखाले ब्याक्टेरिया निस्कन्छ । यसले दाँतमा हुने क्षतिलाई पनि रोक्छ ।
यदि दाँतमा कालो दाग देखिएको छ, खाना दाँतमा फस्न थालेको छ, चिसो तातो खाँदा दाँतमा झनझनाहट हुन्छ वा गीजाबाट रगत आउन थालेको छ भने दन्त चिकित्सकसँग भेटेर उचित उपचार गर्न ढिला गर्नुहुन्न ।
आफ्नो दाँत स्वस्थ र मजबुत बनाउन चाहनुहुन्छ भने निश्चित समयको अन्तरालमा चिकित्सकसँग भेटेर सल्लाह लिनुपर्छ ।
पायल्सबाट कसरी बच्ने ? गर्भावस्थामा पायल्स भए के गर्ने ?
काठमाडौं । गर्भावस्थामा पायल्सको समस्या हुनु आम हो । चाहे तपाईं गर्भवती हुनुअघि यस्तो समस्याबाट
दाम्पत्य सम्बन्ध सफल बनाउन गर्नै नहुने यी पाँच गल्ती
एजेन्सी – दाम्पत्य सम्बन्धमा जोडिनुको अर्थ यो होइन कि श्रीमान–श्रीमती सधै एकसाथ रहोस् । महत्वपूर्ण
मोटोपनका किसिमः कुन बढी खतरनाक ?
काठमाडौं – जुनसुकै कारण होस्, मोटोपनलाई त्यती राम्रो मानिदैन । यसले शरीर भद्दा देखाउने मात्र
गेडागुडी खानु स्वास्थ्यका लागि निकै फाईदाजनक मानिन्छ । हामीले बिग्रियो भनेर फालिने उम्रिएको गेडागुडी खाँदा
लोकप्रियता गुम्दै गएपछि लोकप्रियता गुम्दै गएपछि !
काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माले प्रधानमन्त्रीज्यूको कुरा सुनेर आफूलाई आश्चर्य लागेको बताएका
फ्रान्सका पूर्वराष्ट्रपति सार्कोजीलाई तीन वर्ष कैद
काठमाडौं । फ्रान्सका पूर्वराष्ट्रपति निकोलन सार्कोजीलाई तीन बर्ष कैद सुनाइएको छ । उनलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा
एकीकृत बस्तीको शिलान्यास गर्न प्रधानमन्त्री ओली आज पूर्व जाँदै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आज सन्थाल जातिको एकीकृत बस्ती शिलान्यास गर्न मोरङ जाँदै छन्